Ukukhethwa kohlobo lokukhanyisa okuyinhloko nokukhanyisa okusizayo kungabhekwa kwesinye sezigaba ezibaluleke kakhulu zomsebenzi wokulungisa. Uma uhlelo lokukhanyisa luhlinzekela ukutholakala kwezibani, izibani nezikhwama ze-LED, kubalulekile ukuthuthukisa uhlelo lokufaka izakhiwo ezengeziwe ezizofakwa kuzo. Lesi simiso singokoqobo, uma ukufakwa kwethempulethi ye-LED esihlalweni kuhlelwe.
Ngokuvamile lisetshenziselwa leli khadi ikhadi le-gypsum. Lena yindlela elula futhi eyononopha yokwakha ama-niches angaphakathi nezintambo, ikakhulukazi uma kuziwa ekufakeni izinkinobho ze-LED. Ukufakwa kwe -LED strip kuleli cala kuqukethe umhlangano ofanele, uxhumano lwazo zonke izakhi zesifunda kagesi kanye nokulungiswa kwalo ngaphakathi kwe-niche.
Kuyini ukukhanya kwe-LED
Namuhla, ukukhanyisa kwe-LED (Ukukhanya Okukhanyayo Kokukhanya) kuthandwa kakhulu. Lokhu kuqondiswa izici eziningi:
Ukukhanya okuphezulu kwe-luminescence.
Ukugcina imali okuphawulekayo.
Ukufakwa okulula nokulondolozwa.
Amandla okusebenzisa i-backlight enemibala eminingi.
Abakhiqizi banikeza izibani ze-LED ngezinhloso ezihlukahlukene: kusuka kuma-bulb aphezulu ebangeni elinomshini ojwayelekile kuya kumadivayisi ahlukahlukene asetshenziselwa ukukhanyisa. Abathandi bokuzilungisa bangakwazi ukubhekana kalula nama-LED akhiqizwa kwi-tape. Ukwethula i- tape ye-LED ngezandla zakho akubheki emisebenzini enzima yokwenza. Isimo esiyinhloko sokwenza okusebenzayo nokukhwalwa kwekhwalithi ukulandela ngokucophelela imiyalelo kanye nezincomo zomkhiqizi, kanye nemithetho ejwayelekile yokusebenza nama-LED.
Izinhlobo, ukuqoqa kanye nezindleko zokubuyiselwa kwe-LED
I-LED-tape iqukethe ama-LED, ahlelwe ngokulandelana okuthile ngezinga eliguquguqukayo ngobubanzi obuyi-8 ukuya ku-20 mm. Ubuningi be-tape, obalwa ngombane we-12 V, awudluli u-3 mm, kanti ubude be-hank ngokuvamile buyi-5 m. Ukuguquguquka okuphezulu kwesisekelo, amathanga amancane nezinamathiselo ezihlangothini oluphikisanayo lula kakhulu ukufakwa kwe-LED strip. Inani lentengo enjalo lincike kwimingcele eminingana:
Uhlobo lwama-LED kanye nezinga labo lokukhanya (1-3 amakristalu okukhanya okukhanyisa).
Ibanga phakathi kwama-LED ku-tape (izibani ezingu-30-120 ngamitha).
Ububanzi besisekelo nenombolo yemigqa lapho i-LED ikhona khona.
Inombolo yemibala e-backlight etholakalayo ngemuva kokuxhumeka.
Izinga lokuvikela idivayisi kusuka emswakeni (ukutholakala kwendwangu yamacici noma ikhava).
Ochwepheshe bagcizelela ekuthengeni amateyipu ekhwalithi kuphela: lokhu kubeka ngokuqondile isikhathi sokusebenza kwabo. Izindleko zamathaneli we-Monochrome LED aphakathi kwama-ruble angu-90-600 ngamitha, ahlukahlukene-ama-ruble ayi-170-1300 ngamitha. Ukubeka umbala we-LED kuhilela ukuthi kuhlanganiswe i-unit supply unit, umsebenzi oyinhloko wokuqina kwamandla kagesi nokuguqulwa kwawo kusuka ku-220V kuya ku-12V. Intengo yalesi sici sokukhanyisa ibuye ihluke kuye ngobukhulu namandla: ama-ruble angu-170-500.
Ukubaluleka komsebenzi wokulungiselela
Ngaphambi kokuba uye esitolo ukuze uthole amathuluzi nezinto zokwakha ukuhlela ukukhanya, kufanele uhlole ngokufanele ukuthi ungayidinga kangakanani ithempulethi, yikuphi amandla amandla okufanele abe nawo nokuthi ngabe udinga isilawuli.
Kulezo zimo lapho ukuhlelwa kwe-LED strip kuhlelwe khona, kukhanya ngemibala eminingana, awukwazi ukwenza ngaphandle komshini, isilawuli. Ngesizo salo, ungashintsha umbala kanye nohlobo lwama-LED (kusuka ekushiseni okubushelelezi kuya ekukhanyeni noma kwimodi ye-"chameleon").
Ukubalwa kwamandla kagesi wesikhungo
Amandla okunikezwa kwamandla kumele akwanele ukusebenza kahle kwenethiwekhi, ngakho inani lamanani lingabalwa ngokungeza izinkomba zamandla zazo zonke izibani ze-LED eziseTape. Akunconywa ukuxhuma uchungechunge izingcezu ze-tape, ubude obuphelele obudlula u-15 m. Kungcono ukuxhuma eziningana ezimfushane ngokufana.
Uma kudingekile ukunciphisa itekisi, yinqume ezindaweni ezikhethiwe. Ukuxhuma kwezingcezu zomuntu ngamunye kungenziwa nge-soldering iron (okwamanje, ukuguqulwa kokuxhumana kufanele kugwenywe).
Okucacile umsebenzi wokufaka
Ubuso bodonga, ilanga, i-countertop noma ifenisha lapho i-LED iqothulwa khona kufanele ihlanzeke futhi ingabi namafutha. Itheyipu kufanele ilungiswe ukuze ikwazi ukwenza imisebenzi yayo ngokugcwele. I-angle yokukhipha ukukhanya ye-LED ifika kumadiresi angu-120, ngakho-ke inwanele ukucacisa indawo esondayo. Kodwa-ke, uma ubeka ngokungeyikho ukukhanyiswa kuyoba ukujula kwensimu noma umgogodla welayili, hhayi igumbi.
Ngokuhambisana nezincomo zabathengi ngokuqondile ukufakwa kwe-LED strip kufanelekile ukuqala emva kokuhlanganisa lonke uhla etafuleni noma phansi bese uhlola ukusebenza kwayo. Ngesikhathi sokufakwa, uhlelo kumele luxhumeke kunethiwekhi.
Ngokufaka i-Ribbon LED ngezandla zakho, kuyadingeka ukugwema izinkinobho ezibukhali kakhulu), ngoba zisongela ukulimaza le tape.
Umklamo we-LEDs uqukethe i-anode ne-cathode, ngakho-ke umfakisi kufanele ahlole ngokucophelela ubuciko. Umshini we-LED, efakwe ngokuvumelana nemithetho, uyakwazi ukuhlinzeka ukukhanyisa okude isikhathi eside nokuphezulu.
Ukufakelwa Face: umlando lisebenze ngempumelelo kakhulu. Ubuso ukufakelwa eRussia